क्षुद्र-ग्रह वैशाख १७ गते पृथ्वी नजिक आउदै, के पर्छ असर ? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Science & Tech News/क्षुद्र-ग्रह वैशाख १७ गते पृथ्वी नजिक आउदै, के पर्छ असर ?
क्षुद्र ग्रह पृथ्वी नजिक आउने हल्ला चलेको छ । यसबारे एस्ट्रो`नोमिकल सोसाइटीले पनि विज्ञप्ति मार्फत नै जानकारी गराएको छ । सोसाइटीले यो ग्रह अप्रिल २९ तारिख अर्थात वैशाख १७ गते पृथ्वीको नजिक आउने तर यसले केही क्षति नगर्ने जनाएको छ ।
उक्त ग्रह पृथ्वीको अत्यन्तै नजिक हँदा पनि करिब ६२ लाख ८२ हजार किलोमिटर टाढा रहनेछ । नजिक आउँदा पनि यो क्षुद्रग्रह चन्द्रमाभन्दा साढे सोह्र गुणा टाढा रहनेछ । पृथ्वी र चन्द्रमाबीचको औसत दुरी करिब ३ लाख ८४ हजार किलोमिटर छ ।
हेर्नुस सोसाइटीलेजारी गरेको विज्ञप्ति :
भोलि राति लाग्दैछ चन्द्रग्रहण, यी राशिका मानिसमा पर्नेछ नराम्रो असर